Olee otú Jiri Spotify Dị ka A Mbido
Spotify dị otú ahụ a na-ewu ewu na saịtị ụbọchị ndị a. Ọ na-enye gụgharia ọrụ nke dị iche iche music si ụlọ ọrụ Refeyim dị ka Warner Music Group, EMI, Universal na Sony. Ebe ọ bụ na ya tụụrụ ime na 2008, na online music saịtị chikọta ihe karịrị nde 20 ọrụ, 25% nke onye na-akwụ kwa ọnwa n'ihi na ha na ndenye aha. Dị nnọọ afọ gara aga, Spotify tọhapụrụ ya mobile version na dị maka iOS, Android, blackberry, Windows ekwentị na ndị ọzọ na-arụ ọrụ usoro kwa.
Nke a na saịtị bụ kpere-ebibi music ohere ọrụ na-agagharị na site playlist, album, omenkà, genre ma ọ bụ ndekọ labeelu. Ha nwekwara ike ime ka kpọmkwem searches Ozugbo i nwere onye na akaụntụ guzobere. Ọ bụrụ na ị chọrọ na-anọghị n'ịntanetị gụgharia, ị ka mma ga-esi na adịchaghị version na-enye gị na-ege ntị ma chọọ ọbụna na-enweghị njikọ Ịntanetị.
Nkebi nke 1: na-eke ihe Akaụntụ / Banye Up
Part 2: Download na Wụnye Spotify na kọmputa gị
Part 3: otú imelite Spotify Akaụntụ
Part 4: TunesGo - Download Spotify free - eme ka Spotify dị ka onwe gị music isi iyi
Iji na-enwe ọrụ nke Spotify, i nwere ike gị na akaụntụ. Echegbula n'ihi na e nwere otu nhọrọ edebanye maka a free akaụntụ. Niile i nwere ime bụ pịnye Spotify.com na URL.
Ozugbo ị bụ na peeji nke, ị ga-ahụ a njikọ na-ekwu abanye na. Site na ịpị njikọ, ị ga-nyere nhọrọ abanye na na Facebook. Ị dị nnọọ nwere-ezitekwara a na aha njirimara na paswọọdụ gị Facebook akaụntụ, na Spotify ga-akpaghị aka jikọọ gị Facebook ike akaụntụ gị na Spotify. Ọ bụrụ na ị na-achọghị iji gị Facebook akaụntụ maka Spotify, nanị ịhọrọ Sign Up nhọrọ na ala. Ozugbo ị pịa nke a, Spotify ga-ajụ maka gị chọrọ aha njirimara na paswọọdụ, nakwa dị ka gị adreesị email gị na paswọọdụ. Oge ọ bụla ị abanye na on Spotify, ị ga-Tinye adreesị email na paswọọdụ. Ọ bụkwa site na nke a email na ị ga-enweta na Ịma Ọkwa si Spotify.
Nkebi nke 2: Download na Wụnye Spotify na kọmputa gị
Mgbe eke akaụntụ gị, na-esote ihe ị ga-amasị ime bụ iji wụnye gị Spotify software na PC gị na ma ọ bụ mobile. Ọ ga-adị mfe nweta gị Spotify akaụntụ ma ọ bụrụ na ị nwere software arụnyere. Ma, ị ga-emeghe Spotify n'elu na ọzọ site nchọgharị gị. Plus, Ị ga-agaghị na-enweta a zuru ezu Spotify njem site nanị na-egbu osisi na site na ihe nchọgharị.
Ya mere, ebe bụ ihe ị chọrọ ime iji wụnye Spotify. Ọ bụ nnọọ mfe n'ihi na mgbe ị na-aga na Spotify saịtị, e nwere ugbua otu nhọrọ e n'ihi na ị na ibudata software. Na ala nke na peeji nke, ị ga-ahụ nhọrọ abụọ, ma ibudata Spotify for free ma ọ bụ Gbalịa adịchaghị. Ọ bụrụ na ị na-achọghị ka akwụ ụgwọ ọ bụla ụgwọ n'ihi ọrụ a, ị nwere ike dị nnọọ pịa Get Free.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị dị njikere akwụ atọ dollar elu ndị ọzọ Spotify ọrụ, ị nwere ike pịa Gbalịa adịchaghị. The ezi ihe ugbu a bụ na adịchaghị version bụ free nke mbụ ụbọchị iri atọ gị nkeji nkeji. Spotify chọrọ ewe gị ka adịchaghị mbipụta otú ị ga-enwe echiche nke uru ị ga-enweta site na-enwe a version. Site na-agbalị nke a, ị pụrụ ime ka a mma mkpebi.
Ozugbo echichi faịlụ, '.exe' faịlụ ebudatara kpamkpam, nnọọ na ị nwere na-agba ọsọ faịlụ. A na-enwe ọganihu mmanya ga-apụta, na nnọọ na ị ga-anabata ụfọdụ Ee-Ọ dịghị gbara ajụjụ hazie gị nwụnye. Ozugbo ọ bụla ego n'anya mere, Spotify obubata ga-apụta, na Spotify icon Nwela akpaghị aka kere na gị na desktọọpụ.
Nkebi nke 3: otú imelite Spotify Akaụntụ
Ozugbo ị na-ama na otu akaụntụ, ị ga-achọghị ka a rapaara na otu music na playlist n'elu na ọzọ. Ọ bụ ya mere Spotify na-enye gị nhọrọ imelite akaụntụ gị. Olee otú ị ga-eme nke ahụ? Ọma, dị nnọọ ka ọ na-eme.
Ee, ị dị nnọọ na-eche maka mmelite na-eme. The oké ihe banyere Spotify bụ na ọ na-adịghị achọ ọ bụla na akaụntụ ga-ahapụ site ọhụrụ mgbanwe ọ na-ewebata. Ihe anyị pụtara bụ, mgbe ị na-ẹkedori gị Spotify ọkpụkpọ, na e nwere ihe na-emelite version, software ga imelite site na ya onwe. Ee, ị na-adịghị na-ọ bụla edinam dị ka emeso mmapụta ozi ekwu na e nwere emelitere version. Ọ bụrụ na ị chọrọ a update, dị nnọọ pịa a ma ọ bụ na. Ọ dịghị! Spotify adịghị achọ ka ị pịa ọ bụla Update bọtịnụ nke ụfọdụ ụdị. Niile i nwere ime bụ ẹkedori Spotify software na-enweta na ọhụrụ anya, mgbanwe na ọganihu na ndị ọhụrụ version awade.
Otú ọ dị, e nwere ndị na-eche akpaka mmelite na-adịghị mma. Ha na-eche na mgbanwe a ga-akpa awa ma ọ bụrụ na onye ọrụ otú chọrọ imelite ya Spotify, mgbe ahụ ka ya ikpebiri onwe ya. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị a ọrụ, ọ dịghị mkpa na-echegbu onwe. The Spotify innovators adịghị tweak atụmatụ ukwuu. Mgbanwe ga-enweghị ihe ọ bụla ọkpụrụkpụ mmetụta gị ahụmahụ.
Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị debanyere aha mgbe niile chọrọ inwe ndị ọhụrụ version ozugbo. Ọ bụrụ na ị na-anụ nke ọhụrụ version, ma gị Spotify adịghị imelite na-akpaghị aka, ị ga-aghọta na akpaka mmelite na-mere nwayọọ nwayọọ ka ọ ghara emetụta sava ukwuu. Ugbu a, ọ bụrụ na ị na-achọsi ike-esi ọhụrụ melite, dị nnọọ aga ogologo download peeji na mgbe ahụ reinstall dum Spotify usoro. Echegbula onwe gị banyere na-gị aga na ntọala ehichapu ya. Ọ bụrụ na ị na-adịghị iwepụ gị ẹdude Spotify software tupu ị wụnye emelitere version, mgbe ahụ, ntọala ga-ejigide ya.
Ọ bụrụ na ị chọrọ imelite ozi gị, dị nnọọ pịa aha njirimara gị na mgbago mgbago aka nri òkè nke Spotify obubata. Ịhọrọ 'Akaụntụ' site dropdown nhọrọ na ị ga na-eduzi ndị Spotify online saịtị, kpọmkwem na Overview taabụ. Họrọ profaịlụ taabụ, na ị nwere ike imelite ozi gị. I nwekwara ike imelite na ndenye aha gị ọnọdụ, Ịkwụ Ụgwọ usoro na-ele gị ereta na-anọchite anya gị ịzụrụ n'okpuru Ndenye aha taabụ. Ọ bụrụ na ị na mberede ehichapụ a playlist, ị nwere ike ịga na Naghachi Playlist taabụ iji nweta ya azụ. I nwekwara ike wepụ gị anọghị n'ịntanetị Devices site na ịga na-anọghị n'ịntanetị Devices taabụ.
Nkebi nke 4: TunesGo - download Spotify free - eme ka Spotify dị ka onwe gị music isi iyi
> Resource> Spotify> Spotify Guide maka Beginners